အင်တာနက် အသုံးမပြုခင် သိထားရမည့် အခြေခံအချက်များ - Daily MM News
အင်တာနက် အသုံးမပြုခင် သိထားရမည့် အခြေခံအချက်များ
Category : IT နည်းပညာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ လေ့လာစရာ
သိချင်ရာ မေးခွန်းအကြောင်းအရာများအတွက် အဖြေရရှိနိုင်ပြီး ယနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့ အချိန်အများစုံကို အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။ ပုံမှန် အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ လူနေမှုဘဝတွေကို ဝေမျှနိုင်တဲ့ Social Media တွေသာအသုံးပြုကြသည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာလုပ်နိုင်တဲ့အခြားအရာတွေအများကြီးရှိသည် ဈေးဝယ်ခြင်း၊ ဗွီဒယိုကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ စာရေးခြင်းနှင့်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အခြားအရာများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ အင်တာနက်ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုရန်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယနေ့အင်တာနက်ခေတ်တွင် Click တစ်ချက်နိုပ်ယုံဖြင့် အရာရာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း အပြစ်မဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများရှိပါသည်။ အင်တာနက်မသုံးခင် သတိထားရမည့် ပုံမှန်အချက်များကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။
၁. လုံခြုံရေးဟာ ဒဏ္ဍရီ
အင်တာနက်ပေါ်မှာဘယ်သူမှလုံခြုံမှုမရှိသလို အဘယ်အရာမျှလုံခြုံမှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် မိမိတို့ရဲ့ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ် အရေးကြီးတဲ့ စာသားဖိုင်များကို upload မလုပ်မီသတိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသောမည်သည့် ဖိုင်မဆို သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခံရနိုင်သည်။ အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းသည်ယင်း၏ပြီးမြောက်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုံခြုံရေးတွင်အမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်မရှိနိုင်ပဲ့ လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်ပင် အမြဲတမ်း မှန်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂. Smart ဟက်ကာများ
ကျွမ်းကျင်ဟက်ကာများဟာ automation (အလိုအလျောက်) အပေါ် အမှီသဟဲပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲလူတွေရဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ပုံစံတူအမြဲတမ်းကြံဆလျှက်ရှိသည်။ ဟက်ကာများသည်သူတို့၏ Target ထားသူများအားသူတို့၏ စက်များထဲသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဦးနှောက်အမြဲတွေးတောလေ့ရှိသည့်အပြင် ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်သားများသည်အထောက်အထားများကိုခိုးယူရန် social media ပေါ်က အချက်လက်များကို မူတည်ရှာဖွေနိုင်ပြီး ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ် အချက်လက်များ၊ သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်များ တို့ကို ရယူနိုင်သည်။
၃. Default Password များ
Default Security Policies တွေအသုံးပြုမိခြင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်းသို့ ဆိုင်ဘာပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်နိုင်စေပါသည်။ မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို ဝယ်ပြီးသောအခါ၊ စကားဝှက်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရပါမည် router အများစုတွင် default username / password ဖြစ်တ‌ဲ့ admin / admin ဟုပါရှိသည်။
အကယ်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော username နှင့် password ကိုမပြောင်းမိခဲ့ပါက ၎င်းသည်ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်သားများကိုသင်၏ကွန်ယက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးသင့်စနစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ ကွန်ယက်သို့ဝင်ရောက်ပြီး ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်သားများသည် sniffing နည်းလမ်းများကိုသုံးပြီး မိမိတို့ရဲ့ အချက်လက် ဒေတာတွေကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ( Sniffing ဆိုတာ data packets တွေကိုဖမ်းယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်)
ကုမ္ပဏီအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ဖြစ်သောဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများကိုမလေ့ကျင့်ပေးသောအလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာရှိပါသည်။ ဘယ်ကုမ္ပဏီအတွက်ဆိုဖြစ်စေဝန်ထမ်းတွေဟာအကြီးမားဆုံးစွန့်စားရမှုနဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအား ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများအကြောင်းအမြဲတမ်းလေ့ကျင့် သင်တန်းပေးရပါမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ဘာရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အပြစ်ကင်းမှုကိုအသုံးချခိုးယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Facebook အကောင့် Password မေ့နေတာကို Logout လုပ်စရာမလိုဘဲ ပြန်ယူနည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Facebook Password မေ့နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account ကို Logout လည်းမလုပ်ရဲ Password အသစ်လည်းချိန်မတက်သူများအတွက်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါ။ အခုပြထားပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ Facebook မှာ Password မေ့နေတာကို Logout မလုပ်ဘဲ Password ချိန်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးလိုပြီးစိတ်ဝင်စားသူများလေ့လာနိုင်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ပြသပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ ။ Post Views: 980